Iwo akanakisa maapplication ekuona mafirimu uye akateedzana pane yako Apple TV 4 | Ndinobva mac
Kuuya kwechizvarwa chechina cheApple TV kanenge gore nehafu yapfuura kwave kushanduka kwechokwadi munzira yatinoona terevhizheni. Ichokwadi kuti izvi zvatoita kunge chichemo, asi ichokwadi chiri nyore, uye avo vane mudziyo uyu mumba mavo, uye vanoda mafirimu, nhepfenyuro yeterevhizheni kana zvinyorwa, vanogona kuzvisimbisa. Uye izvi kunyangwe hazvo mapoka makuru enhau senge ATresMedia, Mediaset, uye kunyangwe Amazon vachiri kuramba kuita izvo zvavaifanira kunge vatove kuita: kuvhura yavo yemukati app yeApple TV.
Asi ngatiregei kuzvinyengera, iyo Apple TV 4, pamwe neayo anoshamisa tvOS anoshanda system, haizove chinhu pasina basa rakaoma revagadziri vazhinji, sekungofanana, nekupihwa kusanzwisisika mafungiro emapoka senge ataurwa pamusoro, Netflix kana HBO yaisatombove yakamhara munyika yedu. Naizvozvo, chinyorwa ichi hachisi cheApple TV, asi nezve izvo zvinoshandiswa, zvakanakisa mumaonero angu ane mwero, zvaunogona kunakidzwa nazvo mazana, zviuru, zvemamuvhi, akateedzana uye zvinyorwa, uchikanganwa kamwechete uye zvachose nezveshambadziro.
1 Nyeredzi maficha ekuona mafirimu uye akateedzana pane Apple TV
1.3 RTVE Series uye Clan TV
1.4 Simbisa uye Plex
Nyeredzi maficha ekuona mafirimu uye akateedzana pane Apple TV
Ini ndatozvitarisira izvo Iyi posvo yakagadzirirwa avo vaverengi vanoda mafirimu uye / kana terevhizheni nhepfenyuro. MuApple TV 4 mune zvakawanda zvinoshandiswa zvemarudzi ese, asi nhasi tinotarisa pane zvemukati zvekuona.
Ini ndinodawo kutarisira kuti zvimwe zvekutevera zvinotevera zvichave pachena kune vazhinji venyu, asi chaizvo nekuti zviri pachena, ivo vari pano. Totanga here? Ah, uye kana zvauri kuda zviri kurodha emahara mafirimu, enda kune iyi link yatichangobva kukusiya.
Zvakanaka, hongu, kutanga kwezvose isu tinoisa izvo zviri pachena, iyo app Netflix yeApple TV, chirongwa chinomira mumatanho maviri:
Huru hwakakura, huwandu uye zvakasiyana zvemukati, kunyangwe chiri chokwadi kuti pane nguva dzose mafirimu izvo zvingave zvirinani kukanganwa.
Iyo huru mushandisi interface uye ayo mazano logarithm.
NeNetflix unogona kugadzira akawanda mushandisi profiles, imwe yenhengo yega yega yemhuri, uye iyo system inodzidza zvaunofarira nekuenderera mberi kukuratidza mafirimu, akateedzana uye zvinyorwa zvinoenderana nezvavanoda. Nekudaro, iyo "Yangu rondedzero" chikamu chinokura pamwero wakakwira kupfuura icho iwe chaunokwanisa kushandisa, uye sezvo nguva ichipfuura, inodzidza zvakanyanya uye nekuwedzera, ichiva ichiwedzera uye nekujeka.
Daredevil, Narcos, Imba Yemakadhi, Kudya kwaSanta Clarita uye mazana emamwe mazita anongova mimwe yemienzaniso inozoridza pfungwa dzako.
Hatigone kufuratira iyo app HBO yeApple TV Zvisinei, Icho chikamu chesarudzo iyi zvakanyanya kune mhando yezviri mukati mayo pane zvemhando yeapp pachayo. Westworld, Mudiki Papa, Iyo Waya, Silicon Valley, Mutambo weZigaro, The Exorcist, Tabboo, nezvimwewo, ivo vanoratidza hunhu hwezviri mukati meHBO, senguva dzose, nezvakasiyana, zvisinei, chimiro chayo mushandisi chinosiya zvakawanda zvinodiwa: haugone kugadzira profiles, haugone kuwedzera akateedzana kune ako runyorwa asi zvitsauko zvega, uye zve Ehe, haina kuita se "smart" seNetflix.
Zvakadaro, kana iwe uchida mafirimu uye akateedzana, HBO haigone kusavapo.
RTVE Series uye Clan TV
Isu takaona maviri ekushambadzira maTV masevhisi ayo, sekuziva kwedu tese, achibhadharwa; zvisinei, kupihwa, kunyangwe kushomeka, kwakafara. Ini ndakaisa maapplication mune imwechete batch RTVE Series, iyo yaunogona kunakidzwa nayo hombe nhamba yezviteedzero zvizere, zvemahara uye zvisina kushambadzira paSpanish yeruzhinji terevhizheni, uye Clan TV, yakafanana neapp asi ine vana zvirimo uye zvakare muChirungu kuitira kuti vana vadiki vadzidze mutauro uyu.
Ose akasununguka uye iwe unogona kudhawunirodha zvakananga kubva kuApp Store yeApple TV yako, uye ane akasiyana mavhezheni eIOS.
Simbisa uye Plex
Kana iwe uchida kuve nemamuvhi, akateedzana, zvinyorwa, zvirongwa zvinotorwa kune yako Mac kana yekunze hard drive, ine Kupusha kana ne Plex unogona kunakirwa nezvose zvirimo zvakanangana neApple TV 4 pasina kushandisa AirPlay kubva kune iOS chishandiso.
Ini handiende zvakadzama nezve chimwe nechimwe chazvo sezvo chingave chakanyanya kuenzanisa, zvisinei, ini ndinokukurudzira kuti uongorore zvese nokungwarira uye sarudza iyo inonyatsoita zvaunofarira. Ini ndinokusiya iwe ma link ezvose.
VidLib Icho chinhu chakanakisa seapp kuti ini ndichaichengeta kwekupedzisira. Unogona kufungidzira kugona ona zvese zvirimo zvakagoverwa mumapeji senge HDFull, Pordede, Series Dando, nezvimwe zvakananga paApple TV yako.? Saka usataure futi. Ehezve, VidLib inoshanda, kunyange ini ndichiziva kuti mugadziri wayo ari kushanda pane chiitiko chevashandisi icho chingatishamisa.
VidLib raibhurari yako yevhidhiyo-pane-inoda.
Iwe unozogona kunakidzwa nevhidhiyo-pane-inoda chiteshi muSpanish iyo nharaunda yakawedzera. Asi chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kuwedzera ako mavhidhiyo chiteshi iwe pachako uye gadzira rako raibhurari.
Sisitimu yedu ichatsvaga nekutora, kubva pawebhusaiti iwe yaunoratidza, dhairekitori revhidhiyo nehukama hwayo. Kana iwe uchikwanisa kuiwana, iwe unogona kuwedzera iyo webhu sechiteshi kune yako runyorwa. Uye kana ukasabudirira, nekuti webhusaiti haisati yatsigirwa nealgorithm yedu, usanetseke, unogona kutumira iyo kero yewebhu kune yedu yekuyambira bhokisi kubva kuapp.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Iwo akanakisa maapplication ekuona mafirimu uye akateedzana pane yako Apple TV 4
Rodrigo Camacho akadaro
Uye crackle uye mubi?
Pindura Rodrigo Camacho
Google inoshanda kuita kuti Chrome ive yakachengeteka paMac
Zvinoenderana neyekutanga bvunzo, iyo nyowani LG Ultrafine 5K monitors haina kuunza matambudziko neiyo router